वर्णन मिडिया नेपाल में कम्युनिष्ट कहाँ हैंः उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव - वर्णन मिडिया
समस्याको जंजालमा छोरीले गरेको किरीया र बाबुले दिएको दाईजोको संयोग * माइक्रो र बस एकापसमा ठोक्किए,१४ जना घाइते * विप्लव माओबादी समूहका जिल्ला इन्चार्जसहित दुई पक्राउ * ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो बिरगंज, जोखिम अझैं यथावत * एपीएफ टोलीद्वारा अवैध चोरीपैठारीको सामान बरामद * तस्बिरले देखाइ रहेकोछ प्रधानमन्त्रीको अवस्था * एउटा सभामुखमा नेकपाका तीन धार खेर जानसक्छन् दौरा सुरुवाल * जिम्मेवारीबाट विमुख हुने अधिकार प्रहरीलाई छैन: गृहमन्त्री * ‘समाजवादोन्मुख जनवाद’ का लागि नेकपा विधानबाट ‘जबज’ हटाइँदै * भीम रावलद्वारा सरकारलाई गम्भीर प्रश्‍न: आफ्नो नक्सा बनाउन के ले रोक्यो? *
भारतको चर्चित पत्रिका सरीताले आजको अंकमा नेपालका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको एक लामो अन्र्तवार्ता छापेको छ । सोही पत्रिकामा उनका अनुसार नेपालमा अव कोही कम्युनिष्ट छैन ।
तर कम्युनिष्ट हौ भन्नेवालाको भिड जरुर छ । उनका अनुसार कम्युनिष्ट नामको माला जपिएको छ ।
चीन आफ्नो पोलिसीमा व्यस्त छ । उसले व्यापार बढाएको छ । चीनलाई पनि थाहा छ नेपालमा केवल नाम वा लेपन लगाएका कम्युनिष्टहरु रहेकाछन् । नेपालमा पूँजीवाद वा सामन्तवाद छ तर कम्यूनिज्म छैन ।
माओवादको बारेमा पनि उप्रमले लगभग त्यस्तै वीचार राखेकाछन् । माओवाद पटक्कै छैन तर माओ जप्नेहरु छिटपुट भेट्न सकिन्छ ।
हिन्दुत्वको वारेमा उनले नेपाल एक हिन्दु राज्य हुने सम्भावनालाई पुर्ण रुपमा खारेज गरेका छन् र भनेका छन् नेपालमा, नेपालमा हिन्दुको अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्वी पनि छन् जस्तो बुद्ध जैन, केही इस्लाम, क्रिस्चियन आदि।
नेपाल अहिले चीन तीर झुकेको छ ? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भनेका छन् । यदि तपाँइहरु भारतबाट हेर्नु हुन्छ भने चीनतर्फ झुकेको पाउनु हुन्छ । चीनबाट हेर्ने हो भने भारततर्फ झुकेको पाइन्छ । वास्तवमा नेपाल तटस्थ छ बाँकी हेराई मात्र हो ।
मधेशीको समस्या के छन् ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्
नागरिकताको विषयमा हाम्रा केही समस्या छन् । सरकार समाधानको प्रयास गर्दैछ ।
भारतमा आएर का मगर्ने नेपालीको राम्रोको लागि के गर्न सकिन्छ । नेपाली भारतमा र भारतीय पनि नेपालमा छन् त्यसैले दुवैले दुवै प्रति राम्रो व्यवहार गर्नु पर्छ ।
पर्यटक बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका थिए । हामी हाम्रो नेचुरल व्युटिलाई परिस्कृत गरेर नै अगाडी बढाउन प्रयास गर्दैछौ ।
कोशी बाढी सम्वन्धी प्रश्नमा उनले भने बाढीको कुनै भिसा हुँदैन प्रहरलिे रोक्न पनि सक्दैन त्यसैले दुवै देशले यसलाई समस्या र अवसरको रुपमा हेर्नु पर्छ ।
राम मन्दिर अयोध्याको पहिले मन्दिर भएको स्थानमै बन्ने , सर्वोच्चको फैसला पुनर्विचार गर्न दायर सबै रिट खारेज
आन्दोलनकारीद्धारा मतदान केन्द्रमा आक्रमण